ကိုရီးယား ထမင်းလိပ် (ဂင်ဘော့) | Wutyee Food House
« အိမ်လုပ် ပဲပြုတ်
July 25, 2011 by chowutyee ကိုရီးယားတွင် လူကြိုက်များပြီ ရေပန်းစားဆုံး ဟင်းလျာတစ်မျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကိုရီးယားထမင်းလိပ်ဟာ ဂျပန်ဆူရှီနှင့် ပုံစံ အတော်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်မှာ ငါးစိမ်းတွေ မပါဝင်ပဲ အသီးအရွက်၊ ဟမ်တို့နှင့်သာ လိပ်ထားတာမို့ ကုန်ကျစရိတ် ပိုသက်သာပြီ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ နိုင်မှာပါ။ ၀တ်ရည်ကတော့ ဂျပန် ဆူရှီရော၊ ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်ရော နှစ်မျိုးလုံး နှစ်သက်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်မှာ ဆူရှီတွင် မပါဝင်တဲ့ ချိုစိမ့်အရသာရယ်၊ နှမ်းဆီကြောင့် ရတဲ့ မွှေးရနံ့ကိုပါ ရရှိမှာပါ။ လုပ်ရလည်း လွယ်တာမို့ တူတူ လုပ်စားကြည့်ရအောင်…
ချက်ပြီသား ရှမ်းဆန် [cooked sushi rice] ♦ ဆန်ချိန်ခွက် ၂လုံး
မှတ်ချက် ။ ။ ရှမ်းဆန် မရှိပါက ရိုးရိုးဆန် ၁ချိုး ၊ ကောက်ညှင်းဆန် ၁ချိုးကို ရော၍ ချက်နိုင်သည်။
နှမ်းဆီ [seasame oil] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
နှမ်း [seasame seed] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ရေညှိရွက် [sea weed] ♦ ၄ရွက်
မုန်လာဥနီ [carrot] ♦ ၁ဥ (အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
ဟင်းနုနွယ် [spinach] ♦ လက်တဆုပ်စာ
Ham (or) ၀က်အူချောင်း(အစို) ♦ ၄ချောင်း (အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
ကြက်ဥ [egg] ♦ ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
သခွာသီး [cucumber] ♦ တ၀က် (အခွံနွာပြီ အစေ့ထုတ် အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
ပြင်ဆင်နည်း [Preparation Method]
၁။ အရင်ဆုံး မုန်လာဥနီကို (နှမ်းဆီ(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ))တို့ ထည့်ပြီ ဆီနည်းနည်းဖြင့် ၁မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပါ။
၂။ ဟင်းနုနွယ်ရွက်များကို ပွက်ပွက်ဆူသော အိုးထဲ ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ ပြုတ်ပြီ ရေစစ်ထားပါ။ ပြီမှ နှမ်းဆီ(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) တို့ဖြင့် ရောနုယ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ ၀က်အူချောင်းကိုအရင် ဆီနဲ့ကြော်ပြီမှ ပျားရည်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ပဲငံပြာရည်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)တို့ဖြင့် ရောနုယ်ထားပါ။
၄။ ကြက်ဥကို ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ဆား၊ သကြား)အနည်းငယ်ဖြင့် ရောခလောက်၍ ဆီဖြင့် အ၀ိုင်းပြားကြော်ကာ အရှည်လေးများ ဖြစ်အောင် ဓား(သို့)ကတ်ကြေးဖြင့် လှီးထားပေးပါ။
၅။ သခွာသီးကို (ဗီနီကာ(စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း))တို့ဖြင့် ရောနယ်ပြီ နုပ်ထားပါ။
၆။ ထို့နောက် အစားသွပ်ရန် ပစ္စည်းများဖြစ်သော (မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ၀က်အူချောင်း၊ ကြက်ဥ၊ သခွာသီး)တို့ကို ပန်းကန်တစ်ခုပေါ်သို့ ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ထည့်ထားလိုက်ပါ။
ရ။ ထမင်းကျက်ပြီဆိုလျှင် (နှမ်းဆီ၊ နှမ်း၊ ဆား) တို့ဖြင့် အသာအယာ ရောမွှေထားလိုက်ပါ။
ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်လိပ်နည်း [Rice Roll Recipe]
၁။ အရင်ဆုံး ၀ါးယင်းလိပ်ကို ခင်းပြီ အပေါ်မှ ရေညှိရွက် တစ်ရွက်ကို ခင်းလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် နုယ်ထားသော ထမင်း(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း)ကို ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ရေညှိရွက်ပေါ်တွင် ထမင်းထည့်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီနောက် မုန်လာဥနီ၊ သခွာသီး၊ ကြက်ဥ၊ ၀က်အူချောင်း၊ ဟင်းနုနွယ် တို့ကို ထမင်းပေါ်တွင် တင်လိုက်ပါ။
၄။ ခုထမင်းလိပ် စလိပ်ပါတော့မည်။ ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် ကျစ်ကျစ်လေး လိပ်ပေးပါ။
၅။ ထမင်းလိပ်ရပြီဆိုလျှင် ထက်သော ဓားကို ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပြီ ၁၀ပိုင်းလောက်ထိ ရအောင် ပိုင်းပေးပါ။
၆။ အရသာရှိသော ကိုရီးယားထမင်းလိပ်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 22 Comments	22 Responses
on July 26, 2011 at 1:46 am | Reply Sandakuu
ဗိုက်ဆာလာပီ…. လုပ်ထားတာလေးသေသပ်ပီးလှလိုက်တာ..း))
on August 10, 2011 at 8:32 am | Reply chowutyee
on April 17, 2014 at 10:51 am | Reply su
မမ ရေညှိဖက်က အထုတ်ထဲကဖောက်ပြီးလိပ်ရုံပဲလား?
on July 26, 2011 at 2:58 am | Reply Seng Li Kham
Very good ! Yummmy !
on July 26, 2011 at 10:17 am | Reply Cho Wut Hmone
share bae…. sar chin lar pe hee
စားသွား မှုံကြီးရေ… 🙂
on July 27, 2011 at 4:09 am | Reply Kay Khine Win
အရမ်းကောင်းမယ့် ပုံပဲ..လုပ်စားကြည့် မယ်
on July 29, 2011 at 12:59 am | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
ကြိုက်တယ်။ စားချင်တယ်။း)))
sar twar par Ko Ko Maung!!😀
on August 8, 2011 at 10:59 am | Reply angel
ရေညှိရွက်က ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်လို့ရပါသလား အမ.. ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါနော်….
on August 10, 2011 at 8:42 am | Reply chowutyee
ရေညှိရွက်က ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။ CityMart မှာအများကြီးပဲ ဆူရှီလုပ်တဲ့ ရေညှိရွက်နဲ့ တူတူပဲ ညီမ
on October 14, 2011 at 10:58 am | Reply Amber May
loves ur recipes and tried it at home ! yummy !
on October 14, 2011 at 6:38 pm | Reply chowutyee
I love Korean Rice Roll too!!😀
on December 20, 2011 at 7:49 am | Reply NWE NWE WIN
THANKS A MA
on December 20, 2011 at 2:50 pm | Reply chowutyee
You r welcame sis!!🙂
on January 4, 2012 at 11:11 am | Reply tinzar
ama shan rice ka water bal lout add ya ma lal???
on January 4, 2012 at 11:13 am | Reply tinzar
kimchin htamin kyaw recepie lay lal tin pay par ohn naw??/
on March 30, 2012 at 3:39 am | Reply darlay
[…] July 25, 2011 ကိုရီးယား ထမင်းလိပ် (ဂင်ဘော့) […]
on May 27, 2013 at 10:53 am | Reply May Phyo Hein
Yummy ! Delicious,,,, I like it !